Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Airbus dia manolotra fiaramanidina A220 vaovao voalohany mankany Air France
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny A220 no hany fiaramanidina namboarina ho an'ny tsena seza 100-150 ary mampivondrona ny aerodynamika manara-penitra, fitaovana mandroso ary ny maotera turbofan an'ny Pratt & Whitney farany.
Ny A220 no fiaramanidina mahomby indrindra sy malefaka indrindra amin'ny sehatry ny tsena 100 ka hatramin'ny 150 androany.
Ny Air France A220-300 voalohany dia hiasa amin'ny tamba-jotra antonony manomboka amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina 2021.
Miaraka amin'ny 3,450 nm (6,390 km), ny A220 dia manome zotram-piaramanidina manampy ny fiasa miasa.
Air France dia nahazo ny A220-300 voalohany avy amin'ny kaomandy ho an'ny fiaramanidina 60 karazana, ny baiko A220 lehibe indrindra avy amin'ny kaompaniam-pitaterana eropeana. Ny fiaramanidina dia naterina avy tany amin'ny lalam-piangonana farany an'ny Airbus tao Mirabel, Quebec, Kanada ary naseho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny besinimaro nandritra ny lanonana natao tao amin'ny seranam-piaramanidina Paris Charles-De-Gaulle.
Airbus A220 no fiaramanidina mahomby indrindra sy malefaka indrindra amin'ny sehatry ny tsena 100 ka hatramin'ny 150 androany. Ny fanavaozana ny fiaramanidina Air France irery miaraka amin'ity fiaramanidina farany ity dia hampitombo ny fahombiazany miaraka amin'ny fampiononana ny mpanjifa ary hanohana ny Air France hahatratra ny tanjon'ny tontolo iainana sy ny tanjon'ny faharetana.
Ny voalohany Air France A220-300 dia hiasa amin'ny tambajotra antonony-hatsoaka manomboka amin'ny vanin-taona ririnina 2021. Amin'izao fotoana izao, ny Air France dia miasa andiany 136 Airbus fiaramanidina. Air France koa dia manavao ny sambo fitaterana an-dranomasina lavitra, ary efa nitondra ny A11 350 tamin'ny baiko 38.
Ny tranoben'ny Air France A220-300 dia namboarina tamina lamina iray tokan-tena handray tsara mpandeha 148. Manolotra fiononana lava tokana tsara indrindra, miaraka amin'ny seza hoditra midadasika indrindra, varavarankely lehibe indrindra ary hatramin'ny 20% ny toerana fitobiana ambony isaky ny mpandeha, ny Air France A220 koa dia misy fifandraisana WiFi feno manerana ny tranony sy faladiany USB roa isaky ny sezan'ny mpandeha.
Ny A220 no hany fiaramanidina namboarina ho an'ny tsena seza 100-150 ary mampivondrona ny aerodynamika manara-penitra, fitaovana mandroso ary ny maotera turbofan an'ny Pratt & Whitney farany. Miaraka amin'ny 3,450 nm (6,390 km), ny A220 dia manome zotram-piaramanidina manampy ny fiasa miasa. Ny A220 dia manome hatramin'ny 25% ny fandoroana solika ambany kokoa sy ny fandefasana entona CO2 isaky ny seza raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina teo aloha, ary ny 50% avo lenta avoakan'ny NOx noho ny fenitry ny indostria. Ho fanampin'izany, ny dian-kasim-peo amin'ny fiaramanidina dia ahena 50% raha oharina amin'ireo fiaramanidina taloha - mahatonga ny A220 ho mpifanila vodirindrina manodidina ny seranam-piaramanidina.
Hatramin'ny faran'ny volana Aogositra dia 170 A220 mahery no natolotra ho an'ireo mpandraharaha 11 manerantany.